Tababare Sam Allardyce oo ka hadlay guushii soo daahday ee xulkiisa England uu xalay ka gaaray Slovakia – Gool FM
Tababare Sam Allardyce oo ka hadlay guushii soo daahday ee xulkiisa England uu xalay ka gaaray Slovakia
(Trnava) 05 Sebtembar 2016 – Tababaraha xulka qaranka Ingiriiska ee Sam Allardyce ayaa qiray inuu aad ugu faraxsan yahay guushii 1-0 ee soo daahday oo xalay xulkiisu ka gaaray Slovakia.
Xulka saddexda libaax ayaa u muuqday kuwo dhibcaha la qaybsaday dhiggooda Slovakia oo ciyaaryahan Skrtel uu kaarka cas ka qaatay, waxaana ay barbaro ku furan lahaayeen waayahooda iyagoo ka hoos ciyaaraya macallin Allardyce.
Laakiin goor dambe waxaa goolka guusha u gacan geliyey daqiiqadihii ciyaarta lagu daray (90+5) ciyaaryanka kooxda Liverpool ee Adam Lallana, kulankaas oo qeyb ka ahaa isreeb-reebka koobka Adduunka 2018.
Allardyce ayaa mar wax laga waydiiyey sida uu u arko guushaas waxa uu sheegay inay u qalmeen isla markaana ay ahayd mid dareenku sugayey.
“Waxa uu ahaa mid uu dareenku sugayey dhammaad quruxsan, in aad 10 ciyaaryahan ka guuleysato, waxay ahayd mid adag, wayna adag tahay in la jeexo difaacooda, maxaa yeelay waxay isku dayayaan inay sameeyaan wax badan, laakiin waan helnay wixii aan u qalannay.” ayuu Allardyce u sheegay ITV Sport.
Xulka qaranka Ingiriiska ayaa kulankooda soo aaddan waxa ay marti gelin doonaan dhiggooda Malta 08 bisha October ee soo socota.
DAAWO: Goolkii ugu horreeyay uu Totti u dhaliyay AS Roma….(Maanta oo kale 22-sano ka hor)
Muxuu Wayne Rooney ka yiri inuu ka ciyaaro khadka dhexe ee xulka England?